Trabzona kayak merkezi ve teleferik yapımı için acil yatırımcı aranıyor | RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region61 TrabzonEbe mgbaba Trabzona na ngwa ngwa ngwa ngwa iji wuo ụlọ
24 / 09 / 2013 61 Trabzon, General, TELPHER
Trabzona ski ski na ropeway maka ndị na-etinye ego ngwa ngwa na-achọ: Trabzon 2504 alt Çakırgöl Plateau nke e mere atụmatụ iwukwasị afọ na-esochi emechara okporo ụzọ ahụ, mana enwere nnukwu ụkọ; Onye na-etinye ego ga-ewu ụgbọ ala USB.
Onye otu AK Party Trabzon osote Faruk Ozak Trabzon-Gumushane, Zigana Mountain na 2504 altitude Çakırgöl Plateau na-ezube imecha, okporo ụzọ egwuregwu ski ga-agwụsị, o kwuru. Özak kwuru na nso nso a na ya na Onye Mịnịsta mpaghara Director of Highway na-eduzi nyocha n'okporo ụzọ. Nsogbu a ga-agafe n'afọ na-esochi. ”
A GA-EKWU ỤLỌ BỤ ỤBỌDỤ NA-ECHICHE
N’ikwu na ha gosipụtara oru a n’aka Minista Omenala na Nlegharị Anya na Ertuğrul Günay 4 afọ gara aga, Özak kwuru, vatandaş şmụ amaala nwere nkwanye iji wulite sịnịma ahụ jiri usoro nbufe arụmọrụ gosipụtara ụzọ ahụ dịka arịrịọ mbụ. Enwere m olileanya na okporo ụzọ ga-agwụ n'oge na-adịghị anya. A ga-enwe nnukwu mmasị n’ebe a mgbe ụzọ ahụ gwụchara. Cargbọ eriri USB nke etiti na oche ga-akacha mma ma ọ bụrụ na a na-arụ ụlọ otu ebe. Anyị na-arụ ọrụ ya. A na-aga n'ihu na oru ngo a ngwa ngwa. Anyị nyochara ohere enwere ike ịmịcha afọ 5. Anyị chọpụtara na ihe niile dị. Afọ 2 abụrụla ụzọ dị nro. A na-eme 30 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde TL. M na-eso ọrụ ahụ anya. Emechaala atumatu ndozi ihe. Ugbu a, anyị na-anwa ịchọta ndị na-etinye ego maka ọrụ ahụ ”.
GON REMN THE AKW OFKWỌ AKW OFKWỌ AK OFKỌ
Onye minista gara aga Özak kwuru, gerektir Ọ chọrọ nnukwu ọnụ ahịa. Ọ bụ ihe ziri ezi ịtụ anya ebe ndị ọrụ nzuzo ga-arụ ya. Ngalaba onwe ya nwere ike ime ya ebe a na-eji usoro ibughari ya. Ndi oru nwere ike ime ebe a dika odi nkpa. Onye tinye ya ego ga-eme nke a na ọnụọgụgụ Cargbọ ala ahụ ga - arụ ọrụ oche oche ”.
Isi: m www.xnumxsaat.co
Akụrụngwa Teleferik Project Okay, Na-achọ ụlọ ọrụ na-ewu
Nanị Ngwọta Na-akpata Mberede, Ọrụ 112 Service Mberede
3. Ndị ọrụ achọrọ na ọdụ ụgbọ elu, ejidere ya
Ndi mmadu 1000 ga aru oru na elu ugbo elu Istanbul…
Turkey Kasị Cho Transportation ụgbọala 'Metro' Nwere
AK Party osote Trabzon Faruk Özak
Minista Culture na Tourism Ertuğrul Günay
Ebe a na-eme ski
arụ ọrụ ụgbọ ala